‘ब्ल्याक’ गीतमा आकाशको रंगिन अबतार ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
‘ब्ल्याक’ गीतमा आकाशको रंगिन अबतार !
चलचित्र ‘ब्ल्याक’ निर्माण युनिटले पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रमा समावेश पहिलो गीत सार्वजनिक गरियो । ‘चङ्गा जस्तै’ बोलको गीतमा लिड अभिनेता आकाश श्रेष्ठ फिचर छन् । अभिनेत्री आँचल शर्मालाई पहिलो गीतमा फिचर गरिएको छैन् । आयोजित कार्यक्रममा पनि राजधानी बाहिर भएको कारण आँचल उपस्थित भइनन् ।
रामशरण उप्रेतीले खिचेको चलचित्रमा अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका छन् । आँचल र आकाशसँगै सुन्दर श्रेष्ठ, आयुष रिजाल, सुशिल श्रेत्री, धिरेन शाक्य, प्रिया रिजाल चलचित्रमा लिड अभिनयमा छन् । चलचित्रलाई राजधानीमा गोविन्द शाही तथा मोफसलमा उज्जल पौडल र मनोज राठीले वितरणको जिम्मा लिएका छन् ।